Ny fiainan’ny mpitovo (1 Kôr. 7:25-34)
Tsy ny olon-drehetra no maniry hanambady. Nanome ny antony nifidianany ny ho mpitovo ny tovovavy iray: "Indroa aho no nanana tombontsoa hanompo any amin'ny sahan'Andriamanitra, ary tsy nisalasala aho namaly izany." Mety tsy afaka hanao izany ny olona manam-bady; tsy maintsy hametraka izao fanontaniana izao aloha izy: inona no fiovana eo amin'ny fiainan'ny ankohonako raha mandray izany fanapahan-kevitra izany aho?
Inona no antony mety hijanonana ho mpitovo araka izay nambaran'i Paoly? Vakio ny 1 Kôr. 7:25-34.
Izao no nambaran'Andriamanitra : "Tsy tsara raha irery ralehilahy" - Gen. 2:18. Noho ny amin'io teny io dia mihevitra ny olona sasany fa ny manam-bady no sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainan'izy ireo. Manome ohatra marobe amin'ny olona tsy nanambady anefa ny Baiboly, tafiditra ao amin'izany Ilay ohatra lehibe indrindra amin'ny rehetra dia i Jesôsy izany.
Nilazan'Andriamanitra i Jeremia mba tsy hanambady (Jer. 16:1-3); fitsarana izay niorina tamin'ny toe-javatra ara-tantara izany. Tsy fantatsika raha toa ka efa nesorina izany fandrarana izany, saingy mazava fa mpaminany lehibe tokoa izy na dia mpitovo aza.
Tahaka izany koa, ny fiainana ara-panambadian'i Ezekiela dia toa tsy nanana ny lanj any lehibe, na dia tampoka aza no nahafatesan'nyvadiny. Tsy navela hisaona akory aza izy fa nasaina nanohy ny asa izay efa nampiandraiketin'Andriamanitra azy (Ezek. 24:15-18). Mpaminany hafa koa i Hôsea izay nilazan'Andriamanitra mba haka vady vehivavy janga (Hôs. 1,2,3). Mety ho hafahafa ny fandraisantsika ny tantaran'i Hôsea imbetsaka ny vadiny no nisintaka kanefa nampody azy hatrany i Hôsea. Tsy isalasalana fa sarotra taminy ny ho sary an'ohatra velona maneho ny fitiavan'Andriamanitra, kanefa nampiasain'Andriamanitra ny tokantrano ravan'i Hôsea hanehoana ny fitiavany ny Isiraely. Niala tarnin'Andriamanitra imbetsaka ny Isiraely mba hiankohoka amin'andriamanitra sandoka; Andriamanitra kosa nitady azy ireo ary nampody indray.
Ao amin'ireo ohatra ireo dia tsy olana loatra ny fananan'ireo lehilahy ireo vady na tsia. Ny nahaliana an'Andriarnanitra dia ny fahitsiany sy ny fankatoavany ary ny fahafahany manambara izay tian'Andriamanitra holazainy. Ilaintsika ny mahalala fa tsy voafaritry ny fepetra maha-manambady na tsia antsika ny fiainantsika. Marobe ny olona milaza amin'izao fotoana izao fa tsy ho feno isika raha tsy manambady. Izao no ambaran'i Paoly eo anatrehan'izany: "Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao" - Rôm. 12:2. "mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra" - Rôm. 12:1.
lnona avy ny fomba tsotra ahazoanao miasa amin'ireo tsy manam-bady, mambran'ny fiangonana na tsia?